SuperTuxKart 1.3 inosvitsa mota nyowani, makwara uye kuvandudzwa kweUI | Linux Vakapindwa muropa
SuperTuxKart 1.3 inosvitsa mota nyowani, makwara uye gadziriso yesystem
Pablinux | 01/10/2021 00:31 | Linux Mitambo
Iyo Linux mascot, Tux, iri kwese kwese mumasisitimu edu ekushandisa. Iri muPendi, zvinotibatsira kuridza gitare uye se protagonist mumitambo yakawanda, sedombo reSuper Mario Kart. Ndiwo mutambo wemotokari wakaburitsa hombe kuvandudza vhiki ino, a SuperTuxKart 1.3 iyo yakasvika mwedzi gumi nematatu mushure v1.2, inowanikwa kubva Nyamavhuvhu wegore rapfuura uye yakaunza maficha manyowani senge kuvandudzwa kwekutsigirwa nemutyairi.
SuperTuxKart 1.3 inowanikwa mu yako GitHub peji kubva Chipiri chapfuura, kunyangwe kuvhurwa kwacho kwanga kusiri kwemutemo panguva yekuiisa. Kana iri nhau dzayo, Iye Anosunungura Mukwikwidzi yakaburitswa Nyamavhuvhu 31 isu takatofambira mberi kuti paizovepo mota nyowani, makwara uye zvimwe zvekuzora tweaks, iro risiri basa rehupenyu nerufu asi rinogamuchirwa.
Zvinoratidza zve SuperTuxKart 1.3
New Arenas. Nhandare mbiri idzi dzinotsigira Tora iyo mureza mureza, uchibvumira vatambi vepamhepo kuve nemhando dzakasiyana siyana dzematanho aunosarudza kubva:
Labyrinth yeChechi yeColosseum. Iyi vhezheni inosanganisira itsva nhandare nhandare munzvimbo ine rima yakafuridzirwa neColosseum muRome.
Alien chiratidzo. Inoenderana nenzvimbo chaiyo kubva kuchirongwa cheSETI, uye ikozvino iri mumutambo mukuru.
Sara mumhanyi akatsiviwa Nhingi mhiripiri kubva kuna Pepper & Carrot.
Gnu ane chitarisiko chitsva, saSara N'anga, uyo ava kunzi Sara.
Adiumy naEmule vakagamuchirawo makeover.
Kunatsiridza mune yakajeka graphical mushandisi:
Chimwe chiitiko-chinosimudzira chiitiko che STK chinogona kugoneswa kuburikidza ne "render resolution sarudzo" mumadhigiramu emifananidzo.
Iyo resolution inogona kudzikiswa kusvika ku50%, zvinozoguma zviri nani furemu rate. Iko zvino yagoneswa nekukasira muiyo Android vhezheni yeSuperTuxKart.
Mutsva wepamusoro mamakisi ekusarudza skrini. Sezvo zvave kungowanikwa mune yakasarudzika track kana phantom kutsiva menyu (kwete kunyange zvese), ese akakwira mamaki anogona kuwanikwa munzvimbo imwechete mumenyu nyowani. Nguva dzakanakisa mumadzinza akajairwa, kuyedzwa kwenguva uye kuvhima mazai zvinoratidzwa ipapo.
SuperTuxKart 1.3 uye zvese zvadzo zvitsva zvave kutowanikwa muFlathub, uye ichakurumidza kusvika kumahofisi epamutemo ekuparadzirwa kweLinux. Sezvatataura, inogona zvakare kutorwa pasi kubva kuGitHub.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » Linux Mitambo » SuperTuxKart 1.3 inosvitsa mota nyowani, makwara uye gadziriso yesystem
kukahadzika: Zvinozivikanwa nei SuperTuxKart isiri pane Steam?
Pindura kuna Lusho
Inogona kuve nemhando yelayisensi (GPL):
kuvonga, wakanakisa mutambo wakanaka kunakidza
CutefishOS 0.5 Beta inosvika yakavakirwa paDebian 11 uye nekuvandudza kwakawanda